Lines Delta Air Lines: Ntinye akwụkwọ mba ụwa ọhụrụ ruru pasenti 450
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Lines Delta Air Lines: Ntinye akwụkwọ mba ụwa ọhụrụ ruru pasenti 450
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ed Bastian, onye isi oche Delta Air Lines
Mweghachi nke US na-emetụta ndị ahịa na mba 33 gburugburu ụwa, ebe Delta na-eje ozi 10 n'ime ndị a na-akwụsịghị akwụsị na ndị ọzọ site na ọdụ ya zuru ụwa ọnụ n'ihe metụtara ndị mmekọ ya.
Lines Delta Air Lines ahụtala mmụba 450% na ntinye akwụkwọ mba ụwa karịa izu isii tupu ịmalitegharị US.
A na-atụ anya na ọtụtụ ụgbọ elu mba ụwa ga-arụ ọrụ 100% zuru oke na Mọnde, Nọvemba 8, yana oke ndị njem n'ime izu ndị na-esote.
Ọchịchọ siri ike na-egosipụta n'ofe ma ndị njem ntụrụndụ na ndị njem azụmaahịa na-aga ebe ndị ama ama dịka New York, Atlanta, Los Angeles, Boston na Orlando.
N'ime izu isii kemgbe ekwuputara mmeghe US, Delta ahụla mmụba 450% na ntinye akwụkwọ ahịa mba ụwa karịa izu isii tupu ọkwa ahụ. A na-atụ anya na ọtụtụ ụgbọ elu mba ụwa ga-arụ ọrụ 100% zuru oke na Mọnde, Nọvemba 8, yana oke ndị njem n'ime izu ndị na-esote.
Mweghachi ahụ na-emetụta ndị ahịa na mba 33 gburugburu ụwa, ebe Delta na-eje ozi 10 n'ime ndị a na-akwụsịghị akwụsị na ndị ọzọ site na ọdụ ya zuru ụwa ọnụ n'ihe metụtara ndị mmekọ ya, gụnyere. Air France, KLM na Virgin Atlantic. Ọchịchọ siri ike na-egosipụta n'ofe ma ndị njem ntụrụndụ na ndị njem azụmaahịa na-aga ebe ndị ama ama dịka New York, Atlanta, Los Angeles, Boston na Orlando. Na mkpokọta, ụgbọ elu ahụ ga-arụ ụgbọ elu 139 site na njem mba ụwa 55 na mba 38 na-agbada na US na Nọvemba 8, na-enye ihe karịrị oche 25,000.
"Nke a bụ mmalite nke oge ọhụrụ maka njem na ọtụtụ ndị mmadụ gburugburu ụwa bụ ndị na-enweghị ike ịhụ ndị ha hụrụ n'anya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ," kwuru. Ed Bastian, onye isi oche Delta.
“Ọ bụ ezie na anyị ahụla ka ọtụtụ mba mepere ndị ọbịa America ókèala ha n'oge ọkọchị, ndị ahịa mba ofesi enwebeghị ike iso anyị fega ma ọ bụ gaa na US mgbanwe a niile ugbu a. Anyị nwere ekele maka gọọmentị US maka ibuli mmachi njem ma na-atụ anya ịchịkọta ezinụlọ, ndị enyi na ndị ọrụ ibe ụbọchị na izu ndị na-abịa. "
Flight DL106 si Sao Paulo gaa Atlanta ga-abụ ụgbọ elu mba ụwa mbụ nke Delta ga-agbada na US n'okpuru iwu ọhụrụ na Mọnde na 09:35 yana ọtụtụ ndị ọzọ nọ n'azụ.
Ka ntụkwasị obi nke ndị ahịa na njem na-alaghachi, Delta Air Lines na-abawanye ụgbọ elu n'oge oyi a site na isi obodo Europe gụnyere London-Boston, Detroit na New York-JFK, Amsterdam-Boston, Dublin-New York-JFK, Frankfurt-New York-JFK na Munich-Atlanta.
Ọdụ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu nke Atlanta, Delta, ka bụ ọdụ mba ụwa kachasị na-ekwo ekwo nwere ọpụpụ 56 kwa ụbọchị gaa ebe mba ụwa 39. Ihe na-esote ya bụ obodo US kacha eleta, New York-JFK, nke nwere ọpụpụ 28 kwa ụbọchị gaa obodo 21 mba ụwa.
Mweghachi a dị ịrịba ama na-enye nkwalite akụ na ụba zuru ụwa ọnụ ebe n'otu oge na-akara mmalite nke mgbake azụmahịa mba ụwa Delta. Ụgbọ elu ahụ kọrọ n'oge okpomọkụ a na azụmahịa ntụrụndụ ụlọ US alaghachilarị na ọkwa 2019, mana mgbochi mgbochi na-aga n'ihu egbochila mgbake bara uru n'ofe ụwa. Njem mbata mba ofesi na US nyere $234 ijeri na mbupụ ego na akụ na ụba US, butere mbelata azụmaahịa nke ijeri $ 51 wee kwado ọrụ nde America 1.2 na 2019.
A ga-ahapụ ndị mba ofesi ịbanye US na akaebe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa yana nnwale COVID-19 na-adịghị mma emere n'ime ụbọchị atọ nke ọpụpụ. Ụmụ amaala mba ọzọ na-abụghị ndị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa nwere ike ịbanye na US naanị ma ọ bụrụ na ha tozuru oke maka mwepu dị oke oke ma tinye aka na nnwale, kwarantaini na ịgba ọgwụ mgbochi mbata. Ndị ahịa ga-enyerịrị nkọwa iji mezuo ihe achọrọ nchọta kọntaktị US.
Ndị ahịa niile dị afọ 2 gbagowe ga-eyiri mkpuchi ihu n'oge njem a niile, ebe usoro ịdị ọcha Delta ka dịkwa n'ọnọdụ. Ndị a na-agụnye ihicha mgbe niile na idebe ebe a na-emetụ elu n'ụgbọelu nakwa n'ọdụ ụgbọ elu, yana ịgbasa ọkụ eletrik n'ime ime ụgbọ elu nwere ọgwụ nje dị elu iji hụ na ọ dịghị elu ọ bụla na-ahụghị.